Yakagadziriswa mari kana musiyano wemari? | Ehupfumi Zvemari
Sarudzo pakati pezvigadzirwa kubva pamari yakatarwa kana mari inoshanduka ndeimwe yesarudzo dzinomuka kune ako ekudyara kwehafu yepiri yegore. Mushure mekunge wechipiri apfuura uine giredhi riri nani pane zvaitarisirwa kuongororwa kwemwedzi mitanhatu yekutanga yechiitwa. Nezvishamiso zvine musoro uye nekukahadzika kwakawanda munzira. Asi pakupera kwezuva vakavhara nguva iyi neyakaenzana mukana wezvinzvimbo zvevashambadzi vadiki nepakati, zvinova ndizvo zvazviri pakupedzisira.
Mupfungwa iyi, vaongorori veRenta 4 Banco vakanyatsojeka mune zvavanofarira sezvo ivo vachinyatso chengetedzwa nemitero maringe nemari yakatarwa muna 2019. Kwete pasina, vanoona zano rekudyara iri. pamwe nekukwezva kwakawanda maererano. Mukati mechiitiko chinotarisirwa sekudzikisira, asi kwete kudzikira. Chinhu icho pamwe neakawanda frequency chiri kukurukurwa mumisika yezvemari uye ndiyo iri kukurudzira chikamu chakanaka chevashambadziri kuti vasatore zvinzvimbo mumitengo yemari inoshanduka. Nekutya kuparara kukuru mumisika yemasheya. Chinhu icho kusvika parizvino hachisati chaitika, kure nazvo.
Kune rimwe divi, marongero emari anoenderera mberi nekumisikidza zvishoma nezvishoma mukati megore ra 2019. Kana zvirizvo zvazviri, sezvingatarisirwa mumwedzi iri kuuya, unenge uri mukana wakanaka kuvhura zvinzvimbo mumusika wemasheya kuti uwane purofiti. on. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune ayo musimboti. Kana zvirinani chinhu chakakosha kwazvo icho ivo vari kudzikisira misika yemari. Hazvishamise kuti chokwadi ichi chinotikoka kuti titenge tsika dzakasarudzika mumakambani, munyika nepanze.
1 Ehupfumi kutenderera kudzikira
2 Mamwe matambudziko mune yakatarwa mari
3 Wedzera kusagadzikana
4 Nei uchitenga mari yakatarwa?
5 Chii chiri nani kudyara mazviri izvozvi?
6 Divendendi goho
Ehupfumi kutenderera kudzikira
Chero zvazvingaitika, iyo Renta 4 Banco yekuongorora dhipatimendi inosimbisa kuti kugadzira chero nzira yekudyara ye2019 ichafanirwa kufunga mumwedzi iri kuuya yatiri pasi pechiitiko chekudzikira muhupfumi hwepasirese, kunyangwe ichichengetedza zvine mwero zviito Pane zvakanaka, zvimwe mamiriro emari achiri akanaka uye, sekukwezva kukuru pakukura, uko muongorori wezvemari anowedzerawo "chikwereti chakakwirira padanho repasi rose." Chichava chinhu chekutarisa mumazuva anotevera kana mwedzi.
Nezve kusahadzika kwekusingaperi kwesim, zvakafanira kupa mari kune yakamisirwa mari kana kune inoshanduka mari, ivo zvakare havana kusahadzika nekuti ivo vanochengeta yakajeka sarudzo yechipiri yemari dzakaratidzwa. Iko iriko zano rekudyara rinogona kudiwa kusvika padanho rekuti zviitiko zvehupfumi zvicharamba zvichitsigira shanduko yemhedzisiro yebhizinesi. Kuti maererano nekufungidzira kwesangano remari iri vanofunga kuti rinogona kusvika manhamba. Mune mamwe mazwi, mune dzimwe nguva stock ingadai ichine huwandu hwekukoshesa zvine chekuita nemitengo yazvino.
Mamwe matambudziko mune yakatarwa mari
Kunyange zvakadaro, mari yakatarwa haichazove nerutsigiro rwakajeka rwemabhangi epakati. Sechiratidzo chakajeka chekuti vanogona tora akateedzana engozi kana pakupedzisira sarudzo ino inoita seyakanyanya yekuchengetedza kana yekudzivirira inosarudzwa kune vashoma nevapakati varimari. Iko pasina kupokana kuti mari zhinji inogona kurasika munzira nekuda kwenzvimbo iripo yezvinhu zvemari izvi. Hazvishamise kuti, chero nguva inogona kupa kumwe kusafarira kune vashandisi vakaiswa munzvimbo ino yemari.
Hazvishamise kuti hazvishamise kuti maererano neichi chidzidzo, kuisa mari muzvikwereti kuchiri kunakidza mune izvi, kunyangwe kutaura mune zvakaitika kare. Nezvikwereti zvinosvika pakati pe10% ne30 %, uye nePER iri padyo kusvika makore makumi matatu. Kune rimwe divi, mukati memari inoshanduka inofungidzirwa kuti veEuropean vanogona kubatsira zvakanyanya kupfuura veSpanish kune vashoma nevapakati varimi panguva ino. Kusvika padanho rekuti rakatyora zvimwe zvakakosha zvinotsigira zvaive pamberi paro mumutengo waro.
Chero zvazvingaitika, vaongorori vezvemari vane zvavanoitawo pachokwadi chekuti zvinotarisirwa kudzoka muzvikwereti hazvingaregererwi kubva mukusagadzikana. Ichi ndicho chinhu chatakakwanisa kuongorora mukati memwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino, nemisiyano yakasimba pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi uye izvo mune zvimwe zviitiko zvakakonzera misiyano inopfuura 4% kana 5% mukukoshesa mitengo yavo mumisika yemari. Kuve imwe yenjodzi huru kune vano saver muchikamu chechipiri chegore rakakosha. Kunyanya kana marongero emari akachinja pamativi ese eAtlantic, chinova chinhu chiri kuiswa patafura mumisika yemasheya izvozvi.
Kune rimwe divi, isu tinofanirwa zvakare kufunga nezve njodzi zhinji dzinobva mukukura (kutarisa kutaurirana kwekutengeserana pakati peUS neChina) kana zvematongerwo enyika (Italy, Brexit, sarudzo dzeEuropean uye gakava rinogona kutonga muUkraine, pakati pezvimwe zvinhu zvinoenderana ). Chero nzira, izvi zvinogona kuwedzera mukusagadzikana ichagadzira mikana yekutenga mukati mese gore rinotevera. Ndokunge, chokwadi, mikana yebhizinesi ichagadzirwa kubva zvino zvichienda mberi. Sezvo ingangoita nguva dzose nenyika yakaoma yemari.
Nei uchitenga mari yakatarwa?
Nzvimbo dzakanakira ino kirasi yemasuwo ekudyara ane chinzvimbo chakanangana nemhando yekuchengetedza yakadzikama kusvika zvino. Asi mamiriro ezvinhu aya pasina mubvunzo anogona kuchinja kubva mumazuva mashoma anotevera kana mavhiki uye chinhu chakaipisisa chiri munzira iyo shanduko iyi mukufunga kwenjodzi dzinogona kuitika. Nekuti zvirizvo, mari yakatarwa iri kurega kuva izvo runyararo rwemari pfuma iyo yaakanakidzwa nayo kusvika panguva ino chaiyo. Kana zvisiri izvo zvinopesana, inogona kuve inowedzera mari ine ngozi kupfuura equities pachayo kana kunyangwe kubva kune emhando dzekudyara dzinoonekwa senge imwe
Ehezve, chimwe chinhu chinofanirwa kukosheswa mune yakatarwa mari ndeye kushaya pundutso iyo inopa avo akasiyana zvigadzirwa zvemari panguva ino. Iko kwakaomarara kwazvo kuwana mubereko wakakwirira kupfuura 3% kana 4%, sezvo iwe wakakwanisa kuongorora mumwedzi ichangopfuura, zvese gore rino uye rapfuura. Kunyangwe panjodzi yekusiya mashoma mairi munzira. Chinhu chakaratidzirwa mumari yekudyara zvichibva pamisika yemari yakatarwa. Nekuderera mune avo mapato ekudyara portfolio.
Chii chiri nani kudyara mazviri izvozvi?
Uyu ndiwo mubvunzo wemamirioni emadhora uyo chikamu chakanaka chevashambadziri vadiki nepakati vari kuzvibvunza pamberi pe panorama yakapihwa nebazi remari. Zvakanaka, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti ivo vanozove ekudyara mamodheru anoenderana nemaquities. Nekuti kuwana kudzoka kwepamusoro kuchengetedza hakuzove nesarudzo kunze kwekutora dzimwe njodzi. Nepo kune rumwe rutivi, zvinotarisirwa panguva ino yemari zviri nani pane zvemari yakatarwa. Zvirinani maererano nezvichaitika chaizvo muchikamu chechipiri chegore apo misika yemasheya inokodzera kuvimba kwakanyanya kuita kuti mari ichengetwe nenzira inogutsa zvakanyanya kune zvido zveva saver.
Izvo zvinofanirwawo kusimbiswa kuti iro rehunyanzvi divi remaketi emari haina kushata. Kwete zvishoma. Kana zvisiri mune dzimwe nguva, chengetedza kumusoro kumusoro zvakanyatsotsanangurwa uye izvo zvinogona kubatsira vashoma uye vepakati varimi kuita sarudzo yakanyatsoita. Kunyangwe pamutengo wekutora njodzi yakawanda mukuvhiya kuri kuzotorwa kubva mumazuva mashoma anotevera kana vhiki. Iko iko zvakare ichokwadi kuti chero chinhu chinogona kuitika semhedzisiro yezvinhu zvese zvakamirira zvine misika yemasheya.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti avhareji kudzoka kunopihwa nezvikamu pamasheya kuri pamatanho ari padhuze ne5%. Ndokunge, ane rupo kupfuura chiyero chemubereko chezvinhu zvikuru zvakagadziriswa mari yemitero uye kuti imari yakatarwa uye inovimbiswa gore rega rega. Chero chii chinoitika mumisika yemari. Uye ichi chinhu chinotamba chichitsigira musika wemasheya mu anochengetedza zvakanyanya kana anodzivirira ma profiles ekudyara.
Nekuti ivo vane mari inoenderana chaizvo iyo parizvino haina kuvimbiswa nezvimwe zvigadzirwa zvemari zvemhando ipi neipi. Mumakambani akanyorwa enzvimbo dzakasiyana dzebhizinesi zviitiko. Kubva pamitengo ine mwero kusvika kune vamwe vane hukasha asi iyo pakupedzisira inobvumirana pachinhu ichi: vanopa mari kune vagovana. Iine kusvika pa8% yemari yekufarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Yakagadziriswa mari kana musiyano wemari?